I-Indawo yokuhlala nezidlo zakusasa e-Cromvoirtse - I-Airbnb
I-Indawo yokuhlala nezidlo zakusasa e-Cromvoirtse
Cromvoirt, Noord-Brabant, i-Netherlands
Ikamelo e-i-bed and breakfast ibungazwe ngu-Kimberley
U-Kimberley Ungumbungazi ovelele
Ukukhansela kwamahhala ngaphambi komhla ka-Jan 9.
Uyemukelwa ku-De Cromvoirtse Bed and Breakfast endaweni yasemakhaya iribhoni yaseCromvoirt.
Lapha thina, uLilly, uKees noKimberley Kras saqala ukwakhiwa kweBed and Breakfast yethu ekuqaleni kuka-2018 ngendlela yamafulethi angu-3 nezitebele zamahhashi ezingu-5. Iminyango ibikuvulekele kusukela maphakathi noSepthemba 2019.
I-Bed and Breakfast itholakala phakathi kwezimfunda lapho ehlobo izinkomo ezinemali ephindwe kabili, izimvu namahhashi zihamba ngayo yonke imisindo yasemaphandleni ehlobene nephunga, kodwa ngaphandle komsindo noma ukubonakala kwezimoto zezimoto.
umbhede oyidabulu engu- 1, imibhede yomoya engu- 1, 1 umbhede wosana, Umbhede wengane e-1
ubusuku obungu-7 e- Cromvoirt
Ungakwazi ukufinyelela i-Loonse- ne-Drunense Duinen ngemuva cishe ngaphandle kwethrafikhi, ngamakhilomitha okuhamba ngezinyawo, amabhayisikili kanye namatomu. Ngakolunye uhlangothi, kuyenzeka ukuthi ufinyelele e-'s-Hertogenbosch noma i-Vught ngendlela engaphambili ngemoto eyimizuzu eyi-10 uyothenga, uyodla ngaphandle noma uthathe uhambo lwesikebhe. Ipaki yokuzijabulisa i-'Efteling', iSafari park 'de Beekse Bergen', iNoord Brabants Museum, i-Oertijd museum Boxtel kanye ne-Abbey yaseLa Trappe ephisa ubhiya nendawo yokunambitha nakho kutholakala kalula.
UKimberley Ungumbungazi ovelele